■ Mitahiry rano 70%, fikojakojana 25% kely kokoa, fitsitsiana simika 70%.
■ Ny lalan'ny rivotra sy ny rano mitambatra dia mampihena ny fananganana ambaratonga ary miantoka ny fahombiazan'ny angovo avo lenta.
■ Ny fidirana mora dia mampihena ny vidin'ny fikolokoloana sy ny fandidiana.
PFitsipika momba ny asa: Ny tsiranoka mafana dia miditra ao amin'ny coil maina ao amin'ny faritra ambony ary manaparitaka ny hafanany miakatra amin'ny rivotra manodidina. Ity tsiranoka efa niomana mialoha ity dia miditra amin'ny coil lena ao amin'ilay faritra etsy ambany. Ny rano Induced Air sy Spray dia mamoaka ny hafanana azo avy amin'ny tsiranoka ary miala amin'ny atmosfera.
Ilay ranona nangatsiaka avy eo miverina amin'ny fizotrany.
Ny rano Spray dia voangona ao anaty koveta mifangaro eto ambany, ary avy eo averina averina averina amin'ny alàlan'ny paompy miverina amin'ny faritra coil lena, ary ny Hot Air dia mipoaka ireo mpankafy Axial mankany amin'ny atmosfera.
•harena ankibon'ny tany •fanafody
•Ivotoerana data •orinasa mpamokatra entana
Teo aloha: Air Cooler
Manaraka: Condenser evaporative - Counter Flow